प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिँदै भट्टराईले गरेको त्यो सम्बोधन - Nepal Readers
Home » प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिँदै भट्टराईले गरेको त्यो सम्बोधन
प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिँदै भट्टराईले गरेको त्यो सम्बोधन
यहाँ उत्पन्न भइरहेको वर्तमान राजनीतिक तन्त्रले समग्र नेपाललाई प्रभाव पारेको छ । मुलुक नसोचिएको संकटको अवस्थामा छ । यो संकटको अवस्थाको कारण कहीँ बाहिर छैन- हामीभित्र नै छ । यसमा पध्दतिको कुनै दोष छैन । हाम्रो प्रवृत्ति दोषी छ । प्रजातन्त्रमा हुने राजनीति र गैरप्रजातान्त्रिक अवस्थामा हुने राजनीति एकै किसिमको हुँदैन । तर, हाम्रो राजनीतिका केही पात्रहरूले दुवैलाई एकै ठानेको प्रतीत हुन्छ । प्रजातन्त्रको राजनीतिमा मूल्य, पध्दति र नैतिक पक्ष सशक्त हुन्छन् । तिनको अभावमा प्रजातान्त्रिक शासन पध्दति निर्धो हुन जान्छ र आजको हाम्रो संकट पनि त्यही नै हो ।
संयोग, परिस्थिति र नेपाली जनताको विश्वासका कारण म प्रधानमन्त्री भएको हुँ । त्यसमा अन्तरिमकालको प्रधानमन्त्री बन्नुमा सर्वोच्च नेता गणेशमानजीको सदिच्छा पनि समावेश थियो र त्यसपटक मैले आफूमाथि आएको जिम्मेवारी पूरा निष्ठासाथ सम्पन्न गरेको थिएँ । यसपटक नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला स्वयंले आमनिर्वाचन २०५६ पूर्व नै भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा मेरो नामको प्रस्ताव गरेको कुरा सर्वविदित छ ।
सम्भवतः यही कारणले पनि हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेसले सुविधाजनक बहुमत हासिल गर्न सम्भव भएको हो । यद्यपि, म यस कुरामा विशेष बल गर्न चाहन्नँ । तापनि मेरो प्रधानमन्त्रित्वमा जनताको प्रत्यक्ष अभिमतसमेत अभिव्यक्त भएको छ । यसर्थ मेरो प्रधानमन्त्रित्वमा संसदीय दलको गणित मात्र होइन, जनमत पनि अभिव्यक्त भएको हुँदा, म नेपाली जनताप्रति पनि सोझै उत्तरदायी छु ।
यावत् प्रतिकूल परिस्थिति बाबजुद हाम्रो सरकारले देशका प्राथमिकताका रूपमा रहेका कार्यहरूलाई गति दिने प्रयत्न गरिरहेको छ । मुलुकमा सुशासन सुनिश्चित गर्नका लागि भ्रष्टाचार निवारण गर्ने दिशामा सरकार गम्भीर हुनाका साथै विधि व्यवस्थाका काम गर्ने उपायहरू अवलम्बन गरिँदैछन् । मैले भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने संकल्प गरेको हुँ । पार्टी संस्थापन पक्षले यसका पक्षमा जनमत बनाउने काम गर्नु स्वाभाविक हुन्थ्यो किनभने मैले त ढिलो-चाँडो अवकाश लिनैपर्थ्याे । त्यसले मेरा उत्तराधिकारीलाई स्वच्छ शासन दिन सजिलो हुन्थ्यो ।
म प्रधानमन्त्री बनेको दुई–तीन हप्ता नबित्दैदेखि मेरो खिलाफमा सुरु भएको कचमच आज साँच्ची नै यो मुलुकको राजनीतिक स्थिरता उपर प्रश्नचिह्नका रूपमा र सुशासनको दिशामा एउटा अड्चनका रूपमा तेर्सिएको मैले अनुभव गरेको छु । किनभने जब-जब सरकारले यो देशको प्रगतिको बाधक भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्रमाथि प्रहार गर्न सुरु गरेको हुन्छ, जब एयरपोर्टदेखिका तस्करहरू कमाउन नपाएर अत्तालिएका हुन्छन्, जब सरकार निमुखा जनतालाई न्याय दिने कार्यक्रमसाथ सुशासनको दिशामा अगाडि बढेको हुन्छ, जब प्रतिपक्षका साथ सौहार्दपूर्ण छलफल गरेर ‘यो देश सबैको साझा हो, त्यसैले सबै मिलेर बेथिती हटाऊँ, पारदर्शीता ल्याऊँ अनि हिंसा र आतंक रोकौंं’ भनेर नयाँ–नयाँ पहल सुरु भएका हुन्छन्, तव-तव यहाँ अस्थिरताका ज्वारभाटा किन उठ्ने गर्छन् ? मैले बुझ्न सकेको छैन ।
देशभक्ति दण्डित हुने भीम मल्ल र भीमसेन थापाका कथा र व्यथाहरूको अभिशप्त इतिहासबाट हामी नेपालीले कहिले गएर छुटकारा पाउने हो ? के प्रजातन्त्रको लडाइँको तात्पर्य कुटिल राजनीतिका खेलहरूको विर्सजन र पारदर्शिताको प्रदर्शन हैन रु हामी नेपालीहरूले पचासौं वर्षदेखि राजनीतिलाई एउटा मर्यादाको सीमामा उभ्याउन र मूल्य एवं मान्यतामा आधारित गराउन प्रजातन्त्रको आराधना गरेका हौं । वास्तविक प्रजातन्त्र कायम नभएसम्म, हाम्रा आचरण र चरित्रमा प्रजातन्त्रका उदात्त गुणहरू सञ्चारित नभएसम्म राष्ट्र उँभो लाग्न र काँचुली फेर्न सक्दै सक्दैन । यो मेरो अटल विश्वास हो । यही विश्वासका खातिर मैले लगभग ६० वर्षदेखि अविराम संघर्ष गरेको छु ।
मेरो ध्येय प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा टाँसिएर बस्नु होइन, परिकल्पना पध्दतिको दिशा बदल्ने हो । त्यसका लागि म जुन र जति मूल्य चुकाउनुपरे पनि चुकाउँछु । त्यस्तै नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा नेपाली कांग्रेसले निर्वाह गरेको भूमिकालाई निर्बाध र अविच्छिन्न राख्न म अझै पनि जति त्यागको आवश्यकता छ, त्यति त्याग गर्न तयार र सक्रिय रहनेछु । पार्टी एकताका लागि विगतमा मैले धेरैपटक प्रशस्तै अपमान र तिक्तता सहेको छु । तर, मेरो निवेदन छ- मेरो निष्ठाका विरुध्द प्रयोग भइरहेको दुष्प्रचारसँग असहमति जनाउनु मेरो कर्तव्य हो भन्ने ठानेर आफ्ना कुरा राख्न म आज सदनमा उभिएको छु । यसोभन्दा मेरो कसैकाप्रति दुर्भावना छैन । यसर्थ मेरो यस सम्बोधनलाई अन्यथा नलिइदिन म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्छु ।
वि.सं. २०५६ चैत ३ गते